အုန်းစိမ်းရေ အနည်းငယ် ထည့်လျှင်ဝက်အူပိတ်၊အူချိုနှင့် ကလီစာများပျော့အိအိမဖြစ်ပဲတောင့်တောင့်တင်းတင်းလေးဖြစ်ကာ
ဓားပြားရိုက်ထားသော ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ နှင့်ရေ၊ဆား၊ပဲငံပြာရည်အပျစ်၊နာနတ်ပွင့်တို့ဖြင့်ကျောက်ကပ်ကိုသက်သက်ခွဲပြီးကျက်အောင်ပြုတ်ပါ၊
ပြုတ်ပြီးသားကြက်ဥများကို ပွတ်ပွတ်ဆူနေသောဝက်သားတုတ်ထိုးထဲသို့ အခွံခွာပြီးထည့်ပါ။မိနစ်အနည်းငယ်ထည့်ပြီးပြန်ဆယ်ထားပါ။
Aavashare Mym 26/01/2017 at 09:05 PM
Yummy. Looking at these pictures makes me hungry again
Aavashare Mym 26/01/2017 at 09:07 PM
Where is this shop? Please give us the address or even link Google Map of your favourite shop, Thanks!